3 Wrestler akakunda iyo ECW, iyo WWE uye iyo World Heavyweight Championship - Wwe
3 Wrestler akakunda iyo ECW, iyo WWE uye iyo World Heavyweight Championship
IEECW, iyo WWE pamwe neWorld Heavyweight Makwikwi, ese anozivikanwa seMakundano Enyika muindastiri yekumisidzana indasitiri. Varwi vanobata mazita aya vanoonekwa sevanonyanya pakati pevamwe vese. Nehurombo, iyo ECW uye iyo World Heavyweight Makwikwi haasisiri chikamu cheWorld Wrestling Varaidzo.
Nekudaro, pave paine vaviri varwi, avo vaive nerombo rakanaka rekukunda uye kupfeka ese matatu maMakwikwi. Aya makwikwi akarwa zvakaomarara, uye akaratidza nyika kuti ndivo vaive vakanyanya. Heino runyorwa rweavo varwi, avo vakahwina ese matatu mabhandi egoridhe muWWE.
# 3 Kuratidzira Kukuru
akahwina mikombe mitatu yenyika
Iyo Big Show igamba muWWE uyo akahwina iyo World Wrestling Entertainment Championship kaviri, iyo World Heavyweight zita kaviri, uye iyo Extreme Championship zita kamwe. Iye 'mutambi mukuru wepasirese', akahwina mamwe maChampionship akati wandei. Nekudaro, kugara kwake semhare yenyika, kunorangarirwa nevateveri vake pasirese.
Big Show yakahwina zita reECW kubva kuna Rob Van Dam mumutambo weExtreme Rules. Akarasikirwa nezita rekuti Bobby Lashley, mumutambo weKubvisa Chamber, muna Zvita kusvika Dismember PPV. Akabata chinzvimbo ichi kwemazuva gumi nemashanu.
Akakunda zita reWWE World Heavyweight kekutanga kubva kuna Mark Henry mumutambo wemacheya paTLC PPV. Nekudaro, yake yekutonga zita yaive yehupenyu hwepfupi, sekukurumidza mushure memutambo Daniel Bryan akapinza mari yake mubhangi reBank. Kutonga kwake kwechipiri kwakatora mazuva anopfuura makumi manomwe.
Ratidza rakakunda zita reWWE richipesana neTriple H uye Dombo kekutanga. Akabata zita racho kwemazuva makumi mashanu. Kechipiri paakakunda zita iri, zvaipesana naBrock Lesnar. Akarasikirwa nezita rekuti Kurt Angle paAmagedhoni PPV.
dzidzisa vanhu mabatiro avanokuita
Lil wayne ane vana vangani
sei tichirambana tichidzokerana
sei ndisisina shamwari futi